University DePauw doonaya codsadayaasha muddo 1-sano jagada ee Waxbarashada Nabadda - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
University DePauw doonaya codsadayaasha 1-sano jagada muddo ee Peace Waxbarashada
March 8, 2021 Jobs 0
Taariikh furan: Mar 2, 2021
Waaxda Daraasaadka Waxbarashada (EDUC) iyo Barnaamijka Daraasaadka Nabadda iyo Khilaafka (PACS) ee Jaamacadda DePauw casuuma codsiyada jagada hal sano ee darajada Kaaliyaha Professor si loo bilaabo Ogosto 2021. Ph.D. Daraasadaha Waxbarashada, Daraasaadka Nabadda / Khilaafaadka, ama goob laxiriira oo leh khibrad wax ku ool ah oo ku saabsan barashada nabada iyo isku dhaca (waqtiga ballanta) ayaa la door bidaa. Codsadayaasha ABD ee leh taariikh dhammeystiran oo adag waxaa loo tixgelin doonaa darajada Macallin. Ballanqaadka waxbaridda ardayda heerka koowaad ee cilmiga farshaxanka iyo caddaynta waxbaridda wax ku oolka ah ee loo dhan yahay ayaa lagama maarmaan ah. Waaxdu waxay si gaar ah u raadineysaa musharrixiinta inay bartaan Hordhaca Daraasaadka Nabadda iyo Colaadda, koorso Seminar Sannadka Koowaad oo Dhex-dhexaad ah (FYS), iyo afar xulasho oo lagu barto Daraasadaha Waxbarashada iyo / ama PACS oo wax ka qabta barashada nabadda iyo caddaaladda ee muhiimka u ah waxbarashada iyo doorka waxbarashada iyo isbedelka bulshada ee dhaqdhaqaaqa nabada. Koorsooyinka waxaa laga yaabaa inay sahamiyaan su'aalaha rabshadaha iyo rabshadaha, iska caabinta, dhismaha dhaqdhaqaaqa, praxis iyo barbaarinta iyada oo loo marayo istiraatiijiyado muhiim ah, iyo muraayadaha adduunka. Koorsooyinka khuseeya ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ku taxan yihiin barnaamijyo kale oo anshax marin ah sida Haweenka, Jinsiga iyo Daraasaadka Galmada (WGSS), Daraasaadka Afrikaana (AFST), iyo / ama Daraasaadka Latin Amerika iyo Kariibiyaanka (LACS).
Meelaynta waxbaristu waa 3/3. Musharaxa guuleystey wuxuu bari doonaa PACS 100 guga, hal FYS oo kala duwan xilliga dayrta, iyo wadar ahaan afar 200-300 EDUC iyo / ama PACS xulashooyin ku saleysan cilmibaarista musharraxa. Maalgelinta waxaa loo heli karaa horumarinta xirfadaha iyo cilmi baarista ardayda dhigata shahaadada koowaad.
DePauw waa hormuud, jaamacad faneed oo deeqsi ah oo qaran ahaan loo aqoonsan yahay oo loogu talagalay inay waxbarto wax ka badan 1,700 oo karti sare leh, dhiirigeliya, iyo ardayda kala duwan ee ka kala yimid daafaha dalka iyo adduunka. Kuxiran kuleejka fanka deeqsiyeedka waa mid kamid ah Iskuuladii ugu horreeyay ee Muusikada ee umadda. In ka badan 175 sano, DePauw wuxuu abuuray jawi loolan caqliyeed iyo kaqeybgal bulsho oo u diyaariya ardayda guusha nolosha oo dhan. Waxay ku taalaa Greencastle, Indiana, oo qiyaastii ujirta 45-daqiiqo galbeedka galbeedka Indianapolis, DePauw wuxuu xubin ka yahay Ururka Kulliyadaha Weyn ee Weyn. DePauw wuxuu leeyahay barnaamijyo horumarineed oo awood gaar ah leh, oo ka caawin kara musharraxa inuu ilaaliyo ajende cilmi-baaris firfircoon iyo hagaajinta waxbarashadooda. DePauw sidoo kale waxay leedahay ballanqaad joogto ah oo ku aaddan kala-duwanaanta waxayna dooneysaa inay xoojiso hay'adeena iyada oo loo marayo dhaqammo loo siman yahay oo loo dhan yahay.
Musharrixiinta waa inay ku soo gudbiyaan Interfolio: warqad dabool ah oo soo koobeysa aqoonta, falsafada barista, iyo danaha cilmi baarista; CV-ga; caddayn waxbarid wax ku ool ah (sida muunad muunad ama qiimeyn koorso); saddex warqadood oo sir ah oo talo bixin ah; iyo qoraallada qalin jabinta. Qalabka arjiga waa inuu keenaa caddeyn muujineysa sida ay uga go'an tahay in si guul leh loo kobciyo loona dhexgalo fikradaha iyo khibradaha kala duwan si loo abuuro jawi loo wada dhan yahay ee fasalka iyo Jaamacadda. Fadlan la xiriir Rebecca Alexander, Guddoomiyaha Waaxda Daraasaadka Waxbarashada, at [emailka waa la ilaaliyay] wixii su'aalo ah. Dib u eegista codsiyada waxay bilaaban doontaa Maarso 20keeda waxayna socon doontaa ilaa booska la buuxiyo.
# barnaamijyada tacliinta
EMU waxay raadineysaa Kaaliyaha Booqashada / Associate Professor ee Caddaaladda Restorative
Seychelles waxay noqotay xarunta xudunta u ah barashada nabada
June 22, 2016 Warar & Muuqaal 0
Jaamacadda Seychelles waxay ku dhawaaqday inay ka fiirsanayso inay samayso xarun caalami ah oo loogu talagalay barashada nabadda iyo diblomaasiyadda iyada oo leh khibrad hagid iyo khibrad u leh aasaaskii Seychelles Sir James Mancham. Jaamacadda Seychelles (UniSey) ayaa sheegtay in kani yahay mashruuc hami leh oo waqtigiisii ​​ku soo kordhin doona sumcadda Seychelles oo ah waddan nabdoon oo waxtar dheeraad ah u leh bulshada adduunka. [sii wad akhriska…]
Waaxda Daraasaadka Waxbarashada iyo Nabadda iyo Barnaamijka Daraasaadka Khilaafaadka ee Jaamacadda DePauw waxay ku martiqaadaysaa codsadayaasha jagooyin hal sano ah oo ah darajada Caawinta Professor si ay u bilaabaan Ogosto 2022. [sii wad akhriska…]
Sida Loogu Adeegsado Xirfadaada Si Loogu Hormariyo Isbedelka Bulshada
July 24, 2020 Jobs, opinion 0
David Smith, tababaraha xirfada nabada, wuxuu bixiyaa talo ku saabsan sida loogu dabakho qiyamka shaqsiyeed meherad macno samaynaysa iyo horumarka isbedelka bulshada, laakiin sidoo kale wuxuu bixiyaa nabadgelyo, dakhli xasiloon, iyo mustaqbal wanaagsan. [sii wad akhriska…]